Inona no Vaovao ao amin'ny Docker 1.12 | Avy amin'ny Linux
pedrini210 | | fampiharana, About us, Tambajotra / seriver
Docker no fantatra amin'ny hoe sehatry ny orchestration container container. Amin'ny maha-sehatra azy dia manome ny mpampiasa azy izay rehetra misy ny fitantanana kaontenera, manomboka amin'ny fepetra takiana faran'izay tsotra, toy ny fandrindrana ireo dingana faran'izay tsotra ilain'ny kaontenera, hatrany amin'ireo dingana sarotra indrindra, toy ny fanombanana ny angona ara-potoana. tena izy izay ampahany amin'ny asan'ny orkestra.
Ho an'ity fanararaotana ity dia manavao ny Docker miaraka amin'ny kinova 1.12, izay ahitàna fiasa vaovao marobe, noho ny fiaraha-miasan'ny mpamorona ny sehatra sy ny fandraisana anjaran'ny fiarahamonina.
Vondron-endri-javatra iray no tafiditra ao amin'io fotoana io hamoahana safidy fantatra amin'ny hoe fomba mitobaka. Izy io dia mivelatra ho toy ny rafitra misy node izay ampifandraisina amin'ny rafitra itsinjaram-pahefana, izay misy ny teboka tsirairay dia subsystem iray miditra an-tsehatra amin'ny fitantanana ny rafitra ankapobeny, ho an'ny fitahirizana loharanom-bola. Ny teboka tsirairay dia azo alamina programa ka ny vondrona na ny sasany amin'izy ireo dia mifantoka amin'ny fitarihana asa sasany; Ity vondrona ity dia miasa amin'ny fitantanana ny cluster sy ny lahasa izay ampidirin'ny kaontenera, miampy ny serivisy omena ny API. ary ny vondrona node hafa amin'ny asa sisa tavela. Lizay fantatra amin'ny anarana hoe node mpiasa,tIzy ireo dia miasa amin'ny fanatanterahana asa tsotra sy izay rehetra mifandraika amin'ny fikorianan'ny data ao anaty kaontenera. Zava-dehibe ny manamarika fa ao anatin'ny fiarovana, ireo teboka "tsy mitarika" ireo kaontenera ireo dia tsy manana fidirana feno amin'ny fampahalalana nomen'ny API sy ny trano fitehirizana angona. Voafetra ihany izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany fototra sy ny fanaovana tatitra amin'ny asany tsirairay avy.
Tsara ny manamarika fa ireo teboka voatendry amin'ny asa sasany dia tsy tazonina maharitra eo foana, afaka omena andraikitra hafa amin'ny alàlan'ny fikirakirana. Matetika izy io no anarany ny fanampiana azon'ny tsirairay omena rehefa tsy tanteraky ny iray amin'izy ireo ny andraikitra nampanaovina azy.
Ho fanohanana ny fifandraisana eo amin'ny node dia ampiharina ny manager izay manohana azy ireo amin'ity asa fikirakirana vaovao ity. Ireo teboka izay tarihin'izy ireo amin'ny alàlan'ny marimaritra iraisana, ireo fiasa izay misy serivisy sy asa ao anaty vovonana. Raha atao teny hafa, ny node voafantina ho mpitarika dia mihetsika toy izany mandritra ny fitantanana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra ho an'ny kaontenera. Avy eo, ity node ity izay mitantana sy manome ny satan'ny node tsirairay amin'ny fanaraha-mason'izy ireo, dia manolotra vaovao momba ireo asa sy serivisy tanterahin'izy ireo. Ireto node ireto izay mitantana indray dia tsy mitaky alalana manokana ho an'ny lakile izay manome fidirana amin'ny fampahalalana voalaza, miasa izy ireo tsy misy fifandirana amin'ity olana ity, mamela ny fanampiana izay tsy maintsy avoakany ho an'ny mpitarika ho an'ireo node sisa.
Raha misy ny tadin'ny mpiasa dia ampitaina amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny node managerl Protokol GRPC izay miasa amin'ny tambajotra HTTP / 2. Miaraka amin'ity protocol ity dia tompon'andraikitra amin'ny node fitantanana ny satan'ny asa nanendrena azy ireo izy ireo, miampy ny mariky ny fiainana izay manondro raha mbola miasa ho an'ny kaontenera ilay teboka.
Ny honahona dia miasa ho toy ny rafitra mikoriana haingana, itsinjaram-pahefana ho an'ny dingana tsirairay, noho ny rafitry ny rakitra nozaraina. Izy io dia manana fahatsiarovana vakio eo noho eo izay manatsara ireo fizotran'ny famakiana ireo amin'ny fotoana izay avo dia avo tokoa ny enta-mavesatra ary ilaina ny hafainganan'ny famakiana mandritra ny toe-javatra toy izany. Toy izany koa fanoratana vaovao amin'ny firafitry ny honahona; fanasokajiana ny fampahalalana rehetra amin'ny tambajotra iray ihany, zavatra izay mamonjy fotoana betsaka mandritra ny fangatahan'ny zavatra. Mazava ho azy fa ny fahombiazan'ny fanoratana sy ny famakiana angon-drakitra dia mampiakatra be ny hafainganana sy ny fahombiazana, tsy misy vidiny firy ny fitehirizana sy ny fitehirizana ny angona mandritra ny fotoana.
Docker 1.12 dia mitantana ny rafitra mivondrona mba hanomezana trano fitahirizam-bokatra voazara tsara miaraka amin'ny fidirana haingana amin'ireo angona voarakitra. Fanaovana rafi-pamaky be famakiana izay tsy miresaka afa-tsy ny fanoratana data amin'ny kapila amin'ny fotoana tena ilaina. Zavatra iray izay manome fahombiazana bebe kokoa amin'ity faritra ity ho an'ny rafitra ary tsy mamela ny fandriam-pahalemana ankoatr'izay, izay ao Docker no tena azon'ny olona tsy manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra. Tokony hanana fahalalana mandroso kokoa ianao amin'ny tranga ilainao hikirakirana ny fiarovana ny fivezivezena amin'ny tambajotra misimisy, izay amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mitaky fifantohana na fanamafisana ny tanana.
Raha te hahalala bebe kokoa ianao Docker sy ny kinova vaovao eto dia avelanay anao ny rohy ao bilaogy ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Inona no vaovao ao amin'ny Docker 1.12
Fa maninona no mihena ny isan'ny fizarana GNU / Linux?